Ludo Club - Fun Dice Game 1.1.59 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.1.59 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ဘုတ္ Ludo Club - Fun Dice Game
Ludo Club - Fun Dice Game ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအွန်လိုင်း Ludo Play နှင့်ကြယ်ပွင့်ဖြစ် - LUDO Club play!
ဒါကမော်ကွန်း hit ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း Ludo ၏အွန်လိုင်း multiplayer ဗားရှင်းပါ! ဒီပရီမီယံအန်စာတုံးဂိမ်းထဲမှာကြယ်ပွင့်ကစားသမားတစ်ဦးသီးသန့်ကလပ် join - အကောင်းဆုံးကစားသမားဖြစ်အနိုင်ရတဲ့၏လှေကားကိုတက်နှင့် LUDO ရှင်ဘုရင်၏အဖြစ်လာ!
အကောင်းဆုံးရှာဖွေနေဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်မဟာဗျူဟာနှင့်ကံနှင့်အတူသင့်ရဲ့အနီ, အဝါရောင်, အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်ကိုအပိုင်းပိုင်းကိုရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာပါ။ Ludo ၏ရှင်ဘုရင်၏ Be နှင့်ကြယ်ပွင့်ဖြစ်လာ! အခြားကစားသမားဆန့်ကျင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်ဦးဆောင်၏အပေါ်ဆုံးရောက်ရှိဖို့! Download များနှင့်ပျော်စရာများနှင့်ခံစား၏နာရီထည့်သွင်းပါ။
မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူဤအန်စာတုံးဂိမ်း Play ✦
✦ facebook ကိုချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ကွဲပြားခြားနားသော Device များပေါ်တွင် ludo ဂိမ်းကစား!
✦အနည်းငယ်သာဒေတာကိုသုံးပါ - 2G, 3G, 4G အပေါ်ချောချောမွေ့မွေ့အလုပ်လုပ်တယ်!
✦ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် vs နှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူအော့ဖ်လိုင်း mode မှာ Ludo သည့်အန်စာတုံးဂိမ်း Play
သင့်ဂိမ်းများဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်အခြားကစားသမားတွေနဲ့ Chat ✦
ကစားစောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အပိုဆုနှင့် Lucky အန်စာတုံး features တွေသုံးပြီးဝင်းအခမဲ့ဒင်္ဂါးပြား✦!
သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ non-stop ခံစား၏နာရီရှာဖွေနေပါသလား Ludo ကလပ် Install နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းဆယ်ကျော်သက် Patti ရွှေနှင့် Baahubali ၏ developer များအနေဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အကြိုက်ဆုံးဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းကစား။ အဆိုပါဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်းအသံကျယ်, သပိတ်မှောက်အရောင်များနှင့်သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အန်စာတုံး၏လှပသောဒီဇိုင်းမှာရရှိနိုင်ပါပြီ။
အိန္ဒိယမှာတော့ဒါကြောင့်ဖွင့်ဗားရှင်း Chopat, Chaupur, Pachisi သို့မဟုတ် Parcheesi ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာအစ lado, lodo, iodo နှင့် lido အဖြစ် misspelt ဖြစ်ပါတယ်။ Ludo ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း lotto နှင့်ဂျူဒိုနဲ့တူဂိမ်းများအတွက်ရောထွေးမရသင့်ပါတယ်။ Ludo ကလပ်ကိုအကောင်းဆုံးအခမဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ဂိမ်း Google တွင် Bing မှအပေါ်ကိုရှာဖွေသည်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? ရဲ့အန်စာတုံးလှိမ့်ချလိုက်ကြပါစို့
Ludo Club - Fun Dice Game အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Ludo Club - Fun Dice Game အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Ludo Club - Fun Dice Game အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Ludo Club - Fun Dice Game အား အခ်က္ျပပါ
hazel777 စတိုး 75.69k 49.85M
Ludo Club - Fun Dice Game ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Ludo Club - Fun Dice Game အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.1.59
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://teenpattigold.com/privacynew.html
လက်မှတ် SHA1: 2B:DB:D3:9D:25:40:E8:64:F3:63:FA:53:F5:C0:C8:B6:4A:6B:4F:5A
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Bingo Club
အဖွဲ့အစည်း (O): Moonfrog Labs Pvt. Ltd.
Ludo Club - Fun Dice Game APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ